မန္တလေးမြို့ တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံတွင် (၇၂)ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါခိုင်မြဲ နွားဘေးမဲ့ပွဲ ပြုလု? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် တံခွန်တုိုင်ရပ်ကွက်ရှိ ခိုင်းနွားအိုများအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံတွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ (၇၂)ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါခိုင်မြဲ နွားဘေးမဲ့ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံမှ နွားတွေအား လှူဒါန်းကျွေးမွေးပွဲကို သဒ္ဓါခိုင်မြဲ နွားဘေးမဲ့ပွဲ အမည်နဲ့ နှစ်စဉ် ကျင်းပနေတာပါ၊ အလှူရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းမှုကြောင့် အခုလို ရေရှည် စောင့်ရှောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ အလှူရှင်တွေ ပိုမိုသိရှိပြီး လာရောက်လှူဒါန်းကုသိုလ်ယူနိုင် အောင် အခုလို ဘေးမဲ့နွားများ လှူဒါန်းကျွေးမွေးပွဲပြုလုပ်တာပါ။ ဒီနှစ် နွားအကောင်ရေ ၁၂ဝ အထိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးထားပါတယ်”ဟု တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံဂေါပက အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘရမ်းက ပြောသည်။ တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ပွဲသို့ လာရောက်၍ နွားစာကျွေးမွေးလှူဒါန်းကြသူများကို ဟိန္ဒူ ရိုးရာတေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီး အဆိုပါပွဲတွင် နိဗ္ဗာန်ဈေးဖွင့်လှစ်ကာ အိန္ဒိယ အချိုမုန့်များ၊ သက်သတ်လွတ်အစားအစာများကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရောင်းချပေး ခဲ့သည်။
တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဟိန္ဒူလူမျိုးများက စတင်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ခိုင်းနွားအို ၁ဝဝ ကျော်ကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးထားသည်။ ”နွားဘေးမဲ့ရုံက နွားတွေကို ပြောင်းရိုးစင်းဖတ်၊ နှမ်းဖတ် စတဲ့အစားအစာ ကျွေး မွေးပါတယ်။ မနှစ်က ခိုင်းနွားအို ၈ဝ ကျော် ကျွေးမွေးထိန်းသိမ်းရှောက်စောင့်တာ တစ်နှစ် တာ ကျွေးမွေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စရိတ် ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ ကျော် ကုန်ကျတယ်။ ဒီနှစ် ခိုင်းနွားအို ၁၂ဝ အထိ တိုးချဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ စီစဉ်ထားတော့ တစ်နှစ်တာ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်စရိတ်က ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ ကျော် ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထား တယ်”ဟု တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘရမ်းက ပြောသည်။
တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံရှိ နွားများအား အစားအစာ ကျွေးမွေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းများထားရှိထားပြီး တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များမှ အပတ်စဉ်သတ်မှတ်ရက်များတွင် လာရောက်စစ်ဆေးကုသပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါနွားဘေးမဲ့ရုံသည် အလှူရှင်များ၏လှူဒါန်းမှုများဖြင့် ယနေ့အထိ ရပ်တည် နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရေရှည်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန် အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုများ လိုအပ်လျက်ရှိရာ လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းလှူဒါန်း နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဆုကြေး နှစ်ဆချီးမြှင့်မည့် မန္တလေးမြို့တော်ဝန် မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ၂ဝ၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် လွ?
ဇန်နဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှု ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ?
သီပေါ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ဝေဒနာရှင်များကို အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်ကုမ္ပဏီများတွင် အဓမ္မ အလုပ်စေခိုင်းခံခဲ့ရသူ ရာနှင့်ချီ၍ တောင်ကိုရီ?
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် ဥရောပ ဒုတိယခရီးစဉ်အဖြစ် ပြင်သစ်သို့ ရောက်ရှိ
ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ချီးမြှင့်ငွေလုပ်ငန်း အသုံးစရိတ်ဖယ်ပါက ကွမ်းယာဖိုးသာကျန် ၊ ချီြး